realme ga - eweta smartwatch mbụ ya na Mee | Gam akporosis
Ọtụtụ mmadụ na-eche ndị ọhụụ ọhụrụ a dọtara na teknụzụ. Ana m enweta ọtụtụ nlebara anya nke na-apụ na ụlọ ọrụ dịka Xiaomi mgbe ha hụrụ otú ọhụụ ọhụrụ ha si dị anya na nkà ihe ọmụma mere ka ọ bụrụ ama. Gaghị atụ anya iguzosi ike n'ihe ndị ahịa na-adabere n'ịdị elu ahịa, n'agbanyeghị etu ngwaahịa ndị ahụ si dị ukwuu.
O yiri ka ọ na-apụtawanye ìhè Abịala m ịnọ. Ma ọ bụ ọ dịkarịa ala ruo mgbe ha mehiere dịka ọtụtụ ndị ọzọ na mbinye aka ọzọ bịarutere iji dochie ya. N'ime oge a mma nke mezuru site na inye onyinye mma smartphones na ọnụahịa dị mma ugbu a "na - eyi egwu" na elele anya nke na - ebuli ịmata ihe na atụmanya.
A ga m enwe nche tupu ọnwa agwu
Ma anyị enweghị ụbọchị ọchịchị mara ọkwa. Ma otu mgbasa ozi na yagaa na akaụntụ Madhav Sheth na Twitter, Onye isi ụlọ ọrụ, ewepụtala mkpu niile. Onyogho (mkpuchi nke post) nke anyị na-ahụ ihu elekere na okwu Ka ahụ oge n'adịghị anya ha na-eme ka anyị ghọta na n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ike izute smartwatch nke ụlọ ọrụ ahụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ịmara na n’abalị iri abụọ na ise nke ọnwa a ka emebere mmemme mbinye aka… White na karama. Ihe niile na-egosi na na May 25 anyị ga-ezute ihe mbụ weara nke realme firm.
Nkwupụta nke na-eme ka anyị jiri nlezianya kpọrọ ihe ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, nke ọ bụ ezie na ọ bụ onye ọhụụ, na-eme ka o doo anya na ọ gaghị elekwasị anya naanị n'ime igwe. N'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ezinụlọ dum nke ngwaọrụ jikọtara na smartphone dị ka ekweisi TWS, mgbaaka realme Band na ezigbo realme Watch. Ngwaahịa na-abịa ịsọ mpi na-enweghị ogige na ụlọ ọrụ nkwado ọ bụla n'ahịa.
Enweghị data data na Realme Watch, Ọ na-e leaked na ọ ga-enwe a square format ihuenyo Apple Watch ịke na size nke 1,4 sentimita asatọ na 320 x 320 mkpebi. Anyi amutakwala na o ga-eme ihe mmetuta obi, onwere ikike rue otu izu, ihe mmetụta dị iche iche na njikọta sara mbara. Ihe bụ ihe ọzọ, O yiri ka ọ gaghị abịa naanị ya na anyị nwere ike ịmata ngwaahịa ọhụrụ realme. Na Mee 25 anyị ga-ahụ ihe ha tụrụ anyị n'anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » realme ga-eweta smartwatch mbụ ya na Mee
Ihe Nlere Google Apps abuo amaghi